Tirinta Erayga iyo Saamaynta Dhererka Mawduuca ee SEO | Martech Zone
Muddo dheer, waxaan kaliya isku dayay inaan la tashado bilowga maalgalinta iyo macaamiisha waaweyn ee shirkadaha maxaa yeelay waxaan ogaa inaan awood u leeyahay inaan u dhaqaajiyo irbadda beddelka si xoog leh shirkadaha leh dhaqaalaha iyo waqtiga ay ku qabsadaan saamiga suuqa. Sanadkii la soo dhaafay, markii ugu horeysay, waxaan go aansaday in aan ku dabaqo farsamooyin la mid ah kuwii aan u isticmaali jiray shirkadahaas oo ay la leeyihiin shirkado goboleed, kuwa yaryar… waxayna saameyn xoog leh ku yeelatay hagaajinta qiimeyntooda raadinta dabiiciga ah iyo beddelaadyada.
Xudunta istiraatiijiyadda ayaa hoos u dhigaysa khadka wax soo saarka iyo, taas bedelkeeda, horumarinta a maktabadda. Diiradeena ma saarna xilliyada ama soo noqnoqodka maqaallada aan u soo saareyno macmiilka, waa inaan baarno mowduucyada iyaga xiisaha u leh ee khuseeya ganacsiga… iyo in la dhiso labadaba hay'ad shaqsiyadeed iyo shirkadeed iyo aaminaad labadaba macaamiisha mustaqbalka. Xarunta diirada ayaa ka saareysa shirkadda, taa bedelkeedana, waxay dhigeysaa macaamilka ama rajada ganacsi bartamaha waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Tusaale ahaan, waxaan leeyahay saaxiibo wanaagsan oo leh awood aad u fiican oo la awoodi karo madal suuq geynta guryaha. Waxyaabaha ay ka mid yihiin tours-ka mobilada, fariimaha qoraalka, CRM, joornaalada emaylka, iyo otomaatiga suuq geynta… waxay wax ka qori karaan astaamahaas iyo faa iidooyinka maalin kasta. Taasi waxay dhigeysaa nidaamkooda xudunta istiraatiijiyadooda content.
Laakiin ma wadi lahayn darajayn ama beddelaad.
Sababta Sababtoo ah booqdayaashu way arki karaan boggooda, waxay ka akhrisan karaan astaamahooda, waxayna iska diiwaan gelin karaan koonto tijaabo ah oo bilaash ah. Boqolaal talooyin iyo maqaallo maqaallo ah ayaa laga yaabaa inay helaan saamiyada qaar, laakiin ma beddelayaan.
Focus User oo ka soo horjeedda Algorithm Focus
Bedelkii, Suugada Wakiilada wuxuu ka shaqeeyaa joornaal, baloog, iyo podcast diirada saaraya caqabadaha iyo faa'iidooyinka guusha wakiilka guryaha ijaarka. Waxay ka wada hadleen arrimaha sharciga, amaahda VA, dib u dejinta ganacsiga, canshuuraha gobolka iyo federaalka, dhaqaalaha gobolka, qaab dhismeedka guryaha, xoqida guryaha, iwm. Ujeedada waxyaabaha ay ka kooban yihiin ma ahan talooyin soo noqnoqda oo laga heli karo meel kale; waa in laga helo khibrad ka timaadda ilaha warshadaha kaas oo ka caawin doona rajadooda iyo macaamiishoodaba inay si wax ku ool ah u iibiyaan oo ay u kobciyaan ganacsigooda.
Laakiin ma sahlana. Marka hore, waa inay baaraan waxa maalin nolosha nolosha wakiilka ay tahay iyo dhammaan arrimaha ay ka hor yimaadaan. Kadibna, waa inay dhisaan khibradooda ama soo bandhigaan khubaro kale si ay uga caawiyaan rajadooda iyo macaamiishooda. Waana inay ku kacaan intaas oo dhan iyagoo sii wadaya inay tartan kula jiraan barnaamijkooda.
Si kastaba ha noqotee, saameyntu waxay tahay inay noqdaan kheyraad weyn oo ka dhex jira warshadaha waxayna dhisayaan xiriiro muddo dheer ah oo lala yeesho dhagaystayaasha. Wixii rajooyin ah, waxay noqonayaan meel ay aadi karaan oo ay maskaxda ku hayaan maskaxdooda maadooyinkooda tayada leh. Macaamiisha, waxay ka caawinayaan inay noqdaan kuwa guuleysta oo ku faraxsan shaqooyinkooda.
Mawduuca-Dhererka Ka Soo Horjeedka Tayada
Weydiiso qorayaal badan tixraac ay ku baaraan oo ay ku qoraan maqaal, jawaabtuna waa mid caadi ah:
Muxuu yahay erayga tirinta iyo waqtiga loo qabtay?
Jawaabtaas ayaa i dishay. Waa tan waxa ay su'aashu noqonayso:
Waa kuma dhagaystayaashu maxayse ujeedadu tahay?
Waqtigaas, qoraagu wuxuu sameyn karaa xoogaa baaris horudhac ah oo ku saabsan tartanka, ilaha, iyo shakhsiyaadka bartilmaameedsadayaasha wuxuuna la soo laaban karaa qiyaas ku saabsan dhammaystirka maqaalka iyo qiimaha. Waxba igama gelin dhererka dhererka; Waan daneeyaa dhammaystirka nuxurka. Haddii aan daabacayo maqaal ku saabsan mowduuc, waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aal kasta oo la xiriirta mawduucaas. Waxaan rabaa inaan soo bandhigo xaqiiqooyin iyo tirooyin. Waxaan rabaa inaan ku daro jaantusyo, jaantusyo, sawirro, iyo fiidiyoow. Waxaan rabaa in maqaalka uu noqdo maqaalka ugu xun ee internetka.
Oo markaan daabacno maqaal dhammaystiran, oo sifiican loo baaray, kana fiican ilaha kale, dhererka maqaalkaas wuxuu u egyahay inuu dheeraado, dabcan. Si kale haddii loo dhigo:
In kasta oo dhererka mawduucu uu la jaanqaado darajaynta mashiinka raadinta iyo beddelaadda, ma aha Jidka darajo fiican iyo badal. Hagaajinta tayada waxyaabaha ayaa sababa darajo wanaagsan iyo beddelaad. Iyo waxyaabaha tayada leh waxay iskuxiran yihiin dhererka dhererka.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, aan eegno isku xirnaanta (ma aha sababaha) dhererka dhererka, hagaajinta mashiinka raadinta, iyo u beddelashada faahfaahintan faahfaahsan ee ka socota Capsicum Mediaworks, Sidee Dhererka Mawduuca u Saameeyaa SEO iyo Beddelka. Waxyaabo tayo sare leh oo ku dhaca a eray sare darajooyin fiican, la wadaag badan, darajooyin dheer, hawl qoto dheer, kordhiya beddelaadyada, hoggaamiyeyaasha wadayaasha, iyo hoos u dhigista heerarka soo kabashada.
Gunaanadku waa muhiim; tayada foomka dheer waa maalgashi fiican.
Tags: infographic contentdhererka contenttayada contentdarajaynta contentcilmi baaristaTirinta ereygaisbeddelkaIlaa goormaanimisa ereysida loo darajo fiican yahayinfographicfoomka dheeroo tayo lehdarajeeyocilmiSEOdhammaystirnaaneray tirinta